Ogaden News Agency (ONA) – Kacdoono Kasocda Magaalada Dirdabe & Wayaanaha oo Shacab Laayay.
Kacdoono Kasocda Magaalada Dirdabe & Wayaanaha oo Shacab Laayay.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Dirdabe ayaa sheegaya kacdoono xoogan oo ciidanka wayaanaha iyo taliskooda lagaga soo horjeedo oo maalin nimadii shalay oo Arbaco ahayd kabilowday magaalada Dirdabe iyo deegaanada kuxeeran.
Sida xogta aan kuhelayno dadwayne aad utiro badan ayaa isugu soo baxay suuqyada iyo wadooyinka waawayn ee magaalada Dirdabe kadib dil foolxun oo ciidanka dhaqanka xun ee wayaanuhu ay kagaysteen magaalada Dirdabe ee Gobolka Shiniile.
Warka ayaa intaas kudaraya in ay ciidanka wayaanuhu toogasho kudileen haweenay 40 jir ah oo shacab ah, waxaana lasheegayaa in ciidanka gumaysigu ay si ulakac ah udileen haweenaydaas shacabka magaalada kamidka ahayd.
Dadka deegaanka oo aad uga cadhooday falka foosha xun ee ciidanka cadawgu ay kudhaqaaqeen ayaa siwayn isugu soobaxay iyagoo kudhawaaqayay erayo taliska wayaanaha iyo ciidamadiisa kadhan ah, sidoo kale dadka kacdoonada wada ayaa joojiyay isusocodka gaadiidka.
Goob jooge kusugan magaalada Dirdabe ayaa sheegay in ay ciidanka gumaysigu adeegsadeen awood dheeraad ah iyagoo dadkii shacabka ahaa ooda uga qaaday rasaas nool, halkaas oo sida lasheegayo ay kuwax yeeloobeen dad aad ubadan oo shacab ah oo lagu dabiibayo Isbitaalada magaalada Dirdabe.
Taliska wayaanaha ee dhiiga shacabka quuta iyo kuwa uu gumaadka shacabka u carbiyay ayaa dhibaatooyin kala duwan kagaysta dhulka ay gumaystaan, waxaana meelaha ugu daran ee dadka lagu gumaado kamid ah wadanka Ogadenia oo mudo dheer uu dagaal kasocday.